BOOK REVIEW/FALLANQAYN BUUG! : Buug Dhugasho iyo Dhuuxid mudan!! (When Donkeys Give Birth to Calves)
Katarinholm Talaado 19 June 2012 SMC
BOOK REVIEW/FALLANQAYN BUUG! Buug Dhugasho iyo Dhuuxid mudan!! (When Donkeys Give Birth to Calves)
Bismillaahi, Inta aanan mowduuca cinwaankaan guda gelin bal aan iftiinsho sidaan ku helay...Maalin anoo dhex mushaaxaayo baadidoonka Googlaha ayaan helay afar gabay ow qoray qoraaga weyn ee caalamigaa ee Soomaaliyeed Profassor Cali Jimcaale Axmed, Kuwaas oo ku soo baxay websiteka la yiraa www.warscapes.com . kadib waxay noqotay inaan daba galo gabayadaas afartaa oo dhammaantood ku jiro Buuggaan aan maanta ka hadleyno oo la yiraa "When Donkeys Give Birth to Calves," kaas oo gabayadaas laga soo qaaday.
Runtii aniga la yaab iguma noqon murtida,xigmadda iyo aragtida qiimaha badan ay gudbinayaan gabayada qoraaga, maxaa yeelay waxaan in badan oo hore akhriyay qoraalo iyo buugaag badan ow qoray Profassorka. Qoraaladaas ka sokowna waxaan hore u dhegeysan jiray barnaamijkiisii qiimaha iyo qaayaha badnaa ee ka bixi jiray Radio Muqdisho 80meeyadii, kaas oo la dhihi jiray "Qoraalka iyo Qoraaga!".
Tan iyo dhammaadkii 70meeyadii isha ayaan ku haayay qoraagaan qiimaha badan ee sidiisa naadirka yahay.
Haddaba inta aanan guda gelin bal ila fiirsha qoraalada kale ee caalamigaa ow qoray qoraaga aan maanta ka hadleyno oo ah Profassor Cali Jimcaale Axmed, Kuwaas oo qaarkood lagu turjumay afaf badan oo adduunka looga hadlo, qaarkoodna laga dhigo Jaamacado ka mida kuwa adduunka.
Waa kuwaan Buugaagta ow qoray qoraaga: 1. The Invention of Somalia"1995"
2. Daybreak is Near (1996)
3. Diaspora Blues (2005)
4. Fear is a Cow (2002)
5. The Road less Traveled waxay wada qoreen qoraagii geeriyooday ee Taddese Adera (2008)
6.Silence is not Golden oo isna ay wada qoreen isla qoragaas geeriyooday Taddese Adera sanadkii (1995) 7. Iyo kan aan hadda ka hadleyno ee When Donkeys Give Birth to Calves (2012).
Qoraagu waxuu ka mid yahay Suugaanleeyda Soomaaliyeed ee caalamigaa, sida Qoraaga weyn ee Nuuruddiin Faarax,oo ah Macallinkii Profassorka. Waxay wadaan olole ballaaran oo suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu caalamiyeeyhaayo.
Marka aan in yar jalleecno qaar ka mida cinwaanada qoraallada Profassor Jimcaale, waxaad arkeeysaa in qoraal walbaa salka ku haayo xigmad ama murti Soomaaliyeed.
Tusaale 1. "Silence is not golden" oo salkeedu yahay murtida laga isticmaalo Geeska Afrika iyo caalamka ee tiraa Af daboolan dahab, taas ow qoraagu qabo bedelkeeda, waa ta soomaalidu tiraa nin kaa hadal badan dhaxal adoogaa ayuu kula wadaagaa.
2. "Fear is a Cow" oo salkeedu yahay "Weysha gowrac dibiga ha ku quustee," oo ah murti ay Soomaalidu wada taqaan.
3. "When donkeys give birth to Calves," oo salkiisu yahay murtida soomaaliyeed ee tiraa "Dameeraa Weyla dhala" oo loola jeedo marka laga hadlaayo waxaan dhici karin oo mustaxiila.
When Donkeys Give Birth to Calves:totems, wars, horizons, diasporas waa buug cusub oo gabayo ah, kana koobma shan qayb oo kala ah: "Nomadic," "War Images," "Snapshots," Gnomic/Epigrams," iyo "In the Shadow of the Ellipsis." Waxaa ku jira 60 gabay oo taabanaaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin jahawareerka siyaasadeed, dhaqameed iyo bulshadeed oo Soomaaliya ka jira, walbahaarka iyo uurku 'taallada qaxootinimada, qurba joogga iyo saboolnimada guud ee laga dhaxlo marka ummadi kabaalkeedu jabo.
Waxaa buugga lagu furayaa gabay lagu magacaabo "Atmospheric Spirits", loona hibeeyay qoraaga weyn ee Soomaaliyeed ee Nuuruddiin Faarax. Waa gabay taabanaaya dhiillada soo jiraaga ah ee si toosa ama si dadban u belaysa maanka wadareed ee Soomaalidu leedahay. Sidaan ayuu u qoranyahay gabaygu:
Waxaa fikirkaan sii kobcinaaya gabayga 11aad oo soo afjaraaya qaybta koobaad. Waa gabay lagu magacaabo "The Clan, The Nation and the World." Waana kan:
They'd laugh at the rooster mummy
Qormadaan gaaban ee aan wax kaga sheegayo Profassor Cali Jimacaale buugiisa cusub , waxaan ku soo qaadayaa oo kale gabay la yiraahdo "Exponential" oo nagu dhiirigelinaya in aan riyo cusub oo mug leh la nimaado. Waana kan:
The dawn doesn't say much
Waxa hubanti ah in ummaddu u baahantahay xilm ama riyo cusub oo ay ku doogsato. Riyadaasi waxaa laga dheehankaraa sida ow qabo Profassor Cali Jimcaale dharabta dhedadu dhaliso. waxaan rejeynayaa in dhugmo loo yeesho marka la akhrinaayo buugaan cusub oo fikirka riixayaa uu ku saleysanyahay murtida Soomaalida ee tiraah" Dameeraa weylo dhala."
Waxaa Qaybta 3aad ee Buuggaan oo lagu magacaabo "Snapshots" xuddun u ah Shirib Soomaali ah oo ow tiriyay Faarax seefeey, una qoran sidaan:
Umulisaanse loo arkeyn!
Sidoo kale waxaa Qeybta 2aad oo lagu magacaabo "War Images" ku jira gabayga "A Grim Account"oo ku saabsan Diyaaraddii PANAM ee ku burburtay Tuulada Lockerbie ee Scotland. Waxaa ku jira gabaygaan qayb ka mida gabaygii Xuseen Dhiqle ee ahaa "Qayaashmaash Libaax baa Dhurwaa qaybi yiri soore "
Waxaad kaloo ila fiirisaa Gabayga "Running with the Bulls" oo ay ku xardhanyihiin maahmaah iyo murti Soomaaliyeed, sida: "Dekane duug ma leh" iyo "Macal cune muuqan doonee" oo tilmaamaayo xumaanta dembiyada iyo dhaca xoolo dadweyne ama ummadeed. Shiribka Faarax Seefeey, gabayga Xuseen Dhiqle iyo murtida kale oo aad ka dhex arkayso buugaan intuba waxay wax ku biirinayaan caalamiyeynta iyo baahinta adduunka lagu baahiyo suugaanta Soomaaliyeed. Profassorka waxuu hadda wadaa Buug kale oo gabaya ah, sida ku cad gabaygiisa 59aad ee isla buuggaan, bogga 86aad: Fiiri cinwaanka ah:"Nature poems:some titles for a book still in the offing".
Waxaa hubantiya dedaalka ay hormuudka ka yihiin Profassor Cali Jimcaale iyo Macallinkiisa, Qoraaga weyn Nuuruddiin Faarax oo hadda loo saadaalihaayo inuu helo abaalmarinta Nobelka ee suugaanta, in dedaalkoodu, mustaqbalka dhaw, gaari doono in qaamuusyada ku qoran Luqada Englishka laga dhex heli doono ereyo ah luqada Soomaaliga.
Mr.Xuseen M.Cabdulle "Wadaad"